Amathiphu Ayisihlanu Aphakeme Ama-Ejensi Afuna Ukwakha Ukusakazwa Kwemali Emisha Esimeni Esibucayi | Martech Zone
Njengoba amaqembu wokumaketha kufanele acindezele ikhefu futhi achaze kabusha amasu awo wango-2020, kufanelekile ukusho ukuthi kube nesixakaxaka nokudideka embonini.
Inselelo eyinhloko ihlala ifana. Uxhumana kanjani nabantu ukuze ugcine ukwethembeka futhi uthole amakhasimende amasha? Okushintshe ngokuphelele, noma kunjalo, izindlela nezindlela zokufinyelela kubo.
Lokhu kudala ithuba lezinkampani ezishesha ngokwanele ukuba zisizakale. Nawa amathiphu ayisihlanu alabo ababheka i-pivot ekukhanyeni kwesifo se-coronavirus.
Ithiphu 1: Setha Abasebenzi Ingqondo
Konke kuhle futhi kuhle ukuba nezifiso ezinhle phezulu enhlanganweni, kepha lokhu kufanele kudliwe phansi kubo bonke abasebenzi ukukhuthaza bonke abasebenzi ukuthi babelane ngombono omusha wenkampani. Kube yisikhathi sokulimala kubasebenzi, ngakho-ke ukuqinisekisa ukuthi bayaqonda ukuthi kungani inkampani ilungisa izinqubo zayo kubalulekile. Lokhu kuzonikeza abasebenzi amandla okubona amathuba kuwo wonke amaklayenti, kwakheke imali entsha ye-ejensi.
Ithiphu 2: Ukuxazulula Izinkinga Zokudala
Lokhu yinto bonke abasebenzi be-ejensi abazogxumela kuyo. Imikhankaso emihle yokudala imayelana nokuxazululwa kwezinkinga - futhi amabhizinisi abelokhu ebhekana nezinselelo ezinkulu kunalezi manje. Ukukwazi ukubona izinto ngendlela ehlukile nokwethula imibono emisha kungenye yemishini eyinhloko yezinhlaka zokudala, futhi akukaze kubaluleke kangako lokho.
Ithiphu 3: Sebenzisa kabusha okuqukethwe
Izabelomali, ezimweni eziningi, kungenzeka zelulwe okungenani unyaka wonke wezimali. Kwezinye izimo, ukutshalwa kwezimali okukhulu ezintweni ezifana nezingqungquthela nemibukiso kungenzeka kumosheke, kokunye, kufanele kusatshalaliswe ngokushesha ukuze kugcinwe umfutho. Ukuyisa lokhu endaweni yedijithali kuza nezinzuzo zako, okungukuthi ukusetshenziswa kabusha kokuqukethwe. Ukusingatha amaseshini edijithali njengemicimbi eku-inthanethi noma ama-webinars kuzohlinzeka ngokusakazwa kokuqukethwe okungasetshenziswa kaninginingi. Ngokuphakela okuqukethwe kuziteshi eziningi, lokhu kuzokhuthaza imikhankaso yeqiniso yeziteshi eziningi.
Ithiphu 4: Yenza iMundane, ijabulise
Imicimbi yedijithali iyisibonelo esihle seqhinga okuthi, uma ligijinywa, lingalimaza idumela lomkhiqizo. Ukucatshangelwa kungaba ukuthi okuwukuphela kwendlela ukuhlela i-webland, engaphandle kwebhokisi, ukwenza isibonelo phambi kwamakhasimende. Ngenxa yalokhu, noma yiluphi uhlobo lokwenza ngezifiso noma lokusungula luyenziwa ngomhlatshelo. Ngenkathi ukuthintana ubuso nobuso kukhawulelwa, lokho akusho ukuthi umuzwa owenziwe waba ngowakho awukwazi ukulethwa. Ukukhuthaza umqondo wobuciko kuzokhombisa amaklayenti ukuthi uyakwazi ukuxazulula izingqinamba ezinkulu, ezizomisa ubudlelwano futhi ziqinisekise impilo ende.
Ithiphu 5: Ngena Phambi Kwamaklayenti
Ngeke kube khona inkampani engathintwanga ngandlela thile ubhadane lwe-coronavirus. Ukukhuluma namakhasimende nokuqonda ukuthi iCovid-19 ilithinte kanjani isu labo lokumaketha ngokungangabazeki kuzovula inqwaba yamathuba okufaka amathuba angeziwe abangakaze bacabange ngawo.
Sizibonele mathupha ukuzimisela kwamakhasimende ukwamukela izindlela ezintsha zokucabanga ukuxazulula izinkinga ababhekene nazo njengamanje. Ngokwamukela indlela yokushesha, yokudala ekuphathweni kwe-ejensi, kunethuba elanele lokuqinisa ubudlelwano bamakhasimende nokuwina ibhizinisi elisha.
Tags: agencysokuqukethweinkingai-ejensi yokuklamai-lockdownengqondweni